Hiran State - News: HS:- Dowlada Tanzania oo si buuxda u taageertay howlgalada ay dowlda Kenya ka wado Somaliya iyadoo uu arintaan ku dhiirageliyey Mahiga.
HS:- Dowlada Tanzania oo si buuxda u taageertay howlgalada ay dowlda Kenya ka wado Somaliya iyadoo uu arintaan ku dhiirageliyey Mahiga.
HS:-Dowlada Tanzania oo si buuxda u taageertay howlgalada ay dowlada Kenya ka wado Somaliya iyadoo sida wararkii ugu danbeyey lagu helayo ay arintaan ka shaqeeyeen xubno laga xusi karo wakiilka QM u fadhiya Somaliya oo dalkaasi ka soo jeeda Amb Mahiga. taasi oo ka dhigan in dowladaha geeska Africa si buuxda u taageereen howl kaasi.
Dowlada Kenya ayaa lagu soo waramayaa iney gudaha Somaliya joogi doonto ilaa ay dalka Somaliya ka dhalaneyso dowlad rasmi ah oo sugi karta nabadgalyada xuduuda Somaliya si looga hortago kooxaha qaska ka wada bariga Africa sida Shabaab iyo Al-qacida.
Dhinaca kale marka la eego siyaasada QM midoobay ee Somaliya waxey u muuqataa iney la dhacsan yahiin soo gelitaanka ay Kenya soo galeen gudaha Somaliya maadama aysan cambaareyn siyaasad ahaan dalka Kenya waxaa arintaan ku saacidaya wadamada reer Galbeedka iyo QM midoobay halka ay horey u soo dhaweeyeen dowladaha IGAD.
Hadalki shariifka waxuu noqday amaba laga soo qaaday firik shaqsiyadeed cajiib.
· admin on October 29 2011 13:23:57 · 0 Comments · 1499 Reads ·
14,584,490 unique visits